रेमंड चन्डलरको जन्मदिन छ। वाक्यांश र टुक्रा को चयन | वर्तमान साहित्य
रेमंड चन्डलरको जन्मदिन छ। वाक्यांश र टुक्रा को चयन
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास, धेरै
बारेमा कुरा गर्नुहोस् रेमंड चन्द्रर (१1888-१1959 XNUMX)) को कुरा गर्नु हो Gran उत्तरी अमेरिकी अपराध उपन्यास को मास्टर र शिकागो मा आज जस्तै एक दिन मा जन्म भएको थियो। उसको सिर्जना, निजी जासूस फिलिप मार्लो, शैलीको सबैभन्दा क्लासिक चरित्रको प्रतीक हो, साम स्पाड अफको अनुमति सहित दशियल ह्यामेट, निश्चित। त्यसो भए, आफ्नो सम्झना गर्न जन्म आज, म केहि छान्छु स्निपेट्स र वाक्यांशहरू जस्तो उपन्यासहरूको अनन्त सपना, बाइ पुतली, लामो बिदाइ o तालको लेडी, सबैभन्दा गाढा लाइब्रेरीहरूमा अपरिहार्य।
1 रेमंड थोरन्टन चांडलर
2 वाक्यांश र टुक्रा
2.1 तालको लेडी
2.2 अनन्त सपना
2.3 लामो बिदाइ
2.4 बाइ पुतली
रेमंड थोरन्टन चांडलर
उत्तीर्ण आफ्नो बचपन र इ youth्ल्याण्डमा युवावस्था जहाँ उनले पत्रकारको रूपमा पनि काम गरे। मा सेवा गरियो प्रथम विश्वयुद्ध र द्वन्द्वको अन्तमा उनी संयुक्त राज्य अमेरिका फर्के र क्यालिफोर्नियामा बसोबास गरे। लेख्न शुरू भयो कथाहरू प्रसिद्ध को लागी सस्तो म्यागजिनहरू कालो लि gender्ग (तथाकथित) लुगाहरू) जब उहाँ 45 XNUMX वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
अनन्त सपना (१ 1939 XNUMX)) उनको थियो पहिलो उपन्यास जहाँ उनले एसिड प्रस्तुत गरे, प्रभावशाली तर भावनात्मक पनि फिलिप मार्लो, जसले ती मध्ये7र2कथाहरूमा तारांकित गरे। र त्यहाँबाट उनले उत्तिकै सफल शीर्षकहरू बनाए, ती मध्ये धेरै चलचित्रमा लगियो, जसको लागि उनी पनि १ 40 .० को दशकमा पटकथा लेखक थिए।
वाक्यांश र टुक्रा
"मलाई तपाईको ब्यबहार मनपर्दैन, श्री मार्लो।" किंग्स्लेले स्वरमा भन्यो कि आफैंले ब्राजिलको नट तान्न सक्छ।
- यसको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्, म तिनीहरूलाई बेच्दिन।
यो बिहानको एघार बजेको थियो, अक्टोबरको बीचमा। सूर्य चम्किरहेको थिएन र खुट्टाको स्पष्टतामा स्पष्ट थियो कि पानी परेको थियो। मैले मेरो गाढा निलो सूट एक गाढा निलो शर्ट, टाई र जेबबाट रंगीन रुमाल, कालो जुत्ता र उही मोजा गाढा निलो ट्रिमको साथ छालाको ऊन को मोजा लगाएको थिए। ऊ सफा, सफा, खौरिएको, र स collected्कलन गरिएको थियो, र उसले देखाउँदछ भने मलाई मतलब भएन। ऊ निजी जासूस हुनुपर्ने सबै थोक थियो। म million० लाख डलर भ्रमण गर्न जाँदै थिएँ।
म thirty thirty वर्षको भएँ, म केही समयको लागि युनिभर्सिटि गएँ र मलाई अझै अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने भनेर थाहा छ यदि कसैले मलाई सोध्यो भने, जुन मेरो पेशामा धेरैजसो हुँदैन। मैले एक पटक श्री वल्डे जिल्ला जिल्ला अधिवक्ताका लागि अन्वेषकको रूपमा काम गरें। तपाईंको मुख्य अन्वेषक, बर्नी ओहल्स नामका एक साथी, मलाई बोलाए र भन्यो कि तपाईं मलाई भेट्न चाहानुहुन्छ। म अझै अविवाहित छु किनकि मलाई पुलिस महिला मनपर्दैन।
मैले फिक्का छालाको पट्टी हेरें जुन उनको फिलाको जलेको छाला र जालको बीचमा देखा पर्‍यो। मैले उनलाई शारीरिक रूपमा हेरेँ। त्यसपछि यो मेरो दृश्यबाट हरायो, ढल्केको छानाबाट लुकाइएको। एक क्षण पछि मैले उनलाई डेढ आधा गर्दै गरेको एरोको झैं देखे। स्प्याश सूर्यमा पुग्नको लागि पर्याप्त माथि पुग्यो र केश आफैलाई जस्तै धेरै इन्द्रेणीहरू सुन्दर बनायो। त्यसपछि उनी फेरि सीढीमा गइन् र आफ्नो सेता टोपी खोलिन् र कपाल हिलाइन्। उसले आफ्नो सेतो सेतो टेबुल तान्यो र सेतो कपासको पेन्टमा लम्बरजेकको छेउमा बस्यो र चश्मा चुर्लुम्मै डुबायो र जलायो कि उनी पोखरी राख्ने बाहेक अरु केहि पनि हुन सक्दैन। उसले झुकाव राख्यो र उनको फिलामा थप्पड लगायो। उनले मुखबाट फायर हाइड्रन्टको आकार खोले र हाँसे। यसले उनको मा मेरो चासो समाप्त भयो। म उनको हाँसो सुन्न सक्दिन, तर उनको अनुहारको खाडलले दांतमा जीप खोल्दा मेरो लागि पर्याप्त भयो।
कमिसनहरू छन् जहाँ पुलिसलाई घृणा गरिएको छैन। तर ती ठाउँहरूमा तपाईं एक पुलिस अफिसर हुनुहुनेछैन।
यस्तो पोशाकमा, यो विषय कतै कतै कतै कतै पाइएन, क्रीम पाईमा टारान्टुला जस्तै।
- तपाईं मार्लो, ठीक छ?
- हो, मलाई लाग्छ। "मैले मेरो नाडी घडि जाँच गरें।" यो बिहान छ thirty तीस थियो, जुन मेरो सबैभन्दा राम्रा क्षण होइन।
- मसँग उमेर नहुनुहोस्, जवान मानिस।
"माफ गर्नुहोस्, श्री उमनी, तर म जवान छैन; म बृद्ध छु, म थाकेको छु, र मसँग कफीको एक थोपा पनि छैन। म के मद्दत गर्न सक्छु?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » रेमंड चन्डलरको जन्मदिन छ। वाक्यांश र टुक्रा को चयन